"Lama Cafin Karayo Cristiano Ronaldo, Isaga Ayaa Sabab U Ahaa Guul-darrada & Goolka Laga Dhaliyey" - Fabio Capello Oo Dhulka La Galay CR7 | Laacibnet.net
HomeWararka Champions League“Lama Cafin Karayo Cristiano Ronaldo, Isaga Ayaa Sabab U Ahaa Guul-darrada & Goolka Laga Dhaliyey” – Fabio Capello Oo Dhulka La Galay CR7
“Lama Cafin Karayo Cristiano Ronaldo, Isaga Ayaa Sabab U Ahaa Guul-darrada & Goolka Laga Dhaliyey” – Fabio Capello Oo Dhulka La Galay CR7
Tababarihii hore ee Talyaaniga ee Fabio Capello ayaa sheegay in aan la cafin karaynin Cristiano Ronaldo kaddib markii ay xalay Juventus ka hadhay tartanka Champions League oo toban ciyaartoy oo FC Porto ah ay ku qalbi jabiyeen Turin.
Waqtigii caadiga ahaa ee ciyaartan ayaa kusoo dhamaaday 2-1 ay Juventus ku hoggaaminaysay, waxaanay taasii noqotay barbarro maadaama lugtii hore ay FC Porto kusoo badisay 2-1, waxaana lagu daray waqti dheeri ah iyadoo daqiiqaddii 115aad ay FC Porto heshay laag xor ah.
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa ka mid noqday ciyaartoydii isku dhigaysay kubadda laadka xorta ah oo masaafo 35 yard ah uu ka toogtay Sergio Oliveira, laakiin Ronaldo iyo Rabiot oo booday ayay kubaddu hoostooda ka baxday, waxaanay si toos ah u gashay goolka iyadoo uu waliba CR7 sii daawanayay illaa intii ay shabaqa galaysay.
Juventus ayaa mar dambe heshay gool uu u dhaliyey Adrien Rabiot oo ciyaarta ka dhigay 3-2, waxaana sidaas kusoo baxday Porto oo ay caawiyeen labada gool ee ay ku dhalisay Talyaaniga.
Fabio Capello oo fadhiyey istuudiyaha telefishanka Sky Sports Italia ayaa eedda guul-darradan waxa uu dusha ka saaray Cristiano Ronaldo oo uu sheegay inuu isagu masuul ka yahay goolka waqtiga dambe laga dhaliyey iyo in kooxdu ka hadho tartanka Champions League.
Waxa uu Fabio Capello sheegay in Ronaldo aan alaga cafin karaynin qaladka uu sameeyey, waxaanu yidhi: “Wuxuu ahaa qalad aan la cafin karaynin. Maalintaydii waxaad dooranaysaa ciyaartoyda samaynaya gidaarka ee kubadda isku dhigaya, mana aha inay noqdaan kuwo ka baqaya kubadda. Iyagu waxay ka baqayeen kubadda, waxaanay u boodeen si ay uga baxsadaan (in kubaddu ku dhacdo), waxay soo jeediyeen dhabarka. Taasi maaha wax laga cafin karayo.”
Rio Ferdinand iyo Robbi Savage ayaa iyaguna ku eedeeyey Ronaldo sida uu kubadda dhabarka ugu soo jeediyey.